Tanora · Jona, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Jona, 2015
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Jona, 2015
#Iam76 Manome Voninahitra Ireo Mpianatra Afrikana Tatsimo Maty Nandritra ny Fitroarana tao Soweto
Afrika Mainty23 Jona 2015
"Ny helony : nahasahy niatrika bala mahafaty fijoroana vavolombelona tsy mety maty ataon'ny voatsindrihazolena!"
Azia Afovoany sy Kaokazy18 Jona 2015
Goatemalà17 Jona 2015
Azia Atsimo14 Jona 2015
'Nisy fitsipika hafahafa – tsy maintsy vonona hanaiky ny fanararaotana ny Kamlaris, fa tsy mahazo mitaraina..'
Amerika Latina13 Jona 2015
Mahatsiaro Ny Taloha Ny Ray Aman-dreny Noho Ny Fampidirana Ny Lalao Nintendo Ao Anaty Boky Fianarana
Japana11 Jona 2015
" Hoan'ireo ankizy mpianatra sekoly fanabeazana fototra, tsy kilalao ny Famicom, fa zavatra tsy maintsy ianaran'izy ireo any am-pianarana. Mahatalanjona tokoa ny fotoana iainantsika."
Azia Atsinanana10 Jona 2015
‘Matoria Amin'izay, Izany Zanako Izany’ Miaraka Amin'ireo Hira Fandrotsirotsiana Heno Maneran-Tany
Fiteny08 Jona 2015
Iraisan'ny olon-drehetra maneran-tany ny hira fandrotsirotsiana noho izy ireo manampy ny zazakely amin'ny fahafantarana ny zavatra tiana hambara, mampatory azy ireo noho ilay feo somary milantolanto. Karohy àry ireo hira fandrotsirotsiana eran-tany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Jona 2015
16 ny isan'ny ankizy maty hatramin'ny 2008 noho ny famelana irery ny ankizy ao anaty fiara mikatona. Nandefa ny hafatra tamin'ny alalan'ny fahandroana pizza ao anaty fiara ny sefo mpahandro hanina iray.